क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण : कुन श्रेणीमा को, कति हुन्छ तलब ? | Himal Times
Home Flash News क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण : कुन श्रेणीमा को, कति हुन्छ तलब ?
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले खेलाडीको वर्गीकरण गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा अनुबन्ध गरेको छ। क्यानको बिहीबार बसेको बैठकले महिला तथा पुरुष खेलाडीलाई सन् २०२२ का लागि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा अनुबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो। पुरुषतर्फ ‘ए’ श्रेणीमा सन्दीप लामिछाने, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसी परेका छन्।
Previous articleमेलानिया ट्रम्पको लिलामीका सामग्रीले लक्षित मूल्य पाएनन्
Next articleबागमती प्रदेशमा सोनाम ल्होछारमा ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग